Soosaaraha Nidaamka Darbiga Daaha ee ugu Fiican iyo Warshad | Medo
Dad badan oo naqshadeeyayaal ah ayaa rajeynaya inay qorsheeyaan daaqad weyn sida darbiga daah. Tani waa asalka nidaamka daaqadan!
Badbaadada Ultra waxaa lagu hubiyaa by 2.0mm dhumucdiisuna waxay derbiga, jeexdin patent la qufulka multi-dhibic, sashand jir waafaqsan, iyo 120mm xoojiyay mullion iwm.
Shaashadda duullimaadka isku laaban ee qarsoon waxay la kulantaa labadaba muuqaalka muuqaalka iyo shaqada kaneecada lidka ku ah. Nidaam wanaagsan ayaa daryeela dhammaan faahfaahinta!
NIDAAMKA DHARKA CURTAIN
Nidaamka darbiga daahyada daahyada ee MEDO wuxuu kobciyaa khadka alaabada ee albaabbada iyo daaqadaha, isagoo siinaya xal naqshadeysan shaqsiyeed nolosha guriga. Qaybaha nidaamka hal abuurka ah waxay si weyn u dardar geliyaan howsha aqoon isweydaarsiga, iyagoo awood u siinaya habsami u socodka howlaha. Noocyo kala duwan oo xulashooyin codsi ah ayaa la heli karaa: saamaynta ugu badan ee hufan, baaxadda dusha sare ee muuqaalka iyo hawl adag. Nidaamka cusub ee isku dhafan xarkaha iyo qaabdhismeedka dhalista wuxuu abuuraa saameynta ugu weyn ee daah-furnaanta: guddi go'an iyo guddi la furi karo waxay ka siman yihiin banaanka, taas oo aan horay loogu arag dhammaan warshadaha dhismaha.
Nidaamyada daahyada daahyada ee 'MEDO Residential Curtain Wall' waxay siisaa xalal xirfadaysan oo loo habeeyay mashruuc kasta iyo goob kasta oo goob ah.
Muuqaalka Guryaha Raaxada
Nidaamka dahaadhka daahku wuxuu ku habboon yahay abuurista guryo leh muujinta muraayad weyn, kor u qaadista dhismayaasha oo dhan ayaa uga faa'iideysan kara dabaqa illaa galaaska saqafkiisa oo ku teedsan dabaqyo dhowr ah iyo xitaa fadhiisanaya xagal toos ah hoostiisa saqafka.
Fududado kala duwan oo Muraayado ah
Naqshadaynta qaab-dhismeedka laba-jeexdin
Jeexdin laba geesood ah
Naqshadeynta qaab-dhismeedka laba-jeexdin oo leh nidaam quful hawo leh oo loogu talagalay shaqeynta hawo-qaadashada iyo amniga dheeriga ah.
Saddex galaas oo leh laba nooc
Saddex galaas oo leh laba kala-dheji oo loogu talagalay waxqabadka sare ee dahaarka codka iyo kuleylka kuleylka. Qalabaynta kuleylka ka weyn ee loogu talagalay waxqabadka kuleylka wanaagsan.
Meel ku soo daadi oo ku dheji, duubis sare
Daaro jir iyo faashad
Cidhiidhi biyo ah oo aan caadi ahayn
Meel ku daadi oo ku dheji aragti hufan oo moodada ah. Gaskado isku dhafan oo loo yaqaan 'EPDM gaskets' oo loogu talagalay isku-hawo hawo sare leh iyo biyo-ku-adkeyn.
Daaweynta xad-dhaafka ah
Qodobka qufulka u adkeysiga u adkeysiga iyo ilaaliyaha ayaa bixiya badbaado dheeri ah waxayna xoojiyaan waxqabadka iska caabinta culeyska dabaysha ee cufnaanta hawada iyo cidhiidhiga biyaha. Gacan-ku-hayn aan sal lahayn ayaa bixisa khibrad nololeed oo raaxo leh oo leh muuqaal yar, khadad naqshad siman, iyo hawlgal xasilloon. Isticmaalayaasha way ku nasan karaan amniga daaqada xitaa haddii ay yihiin kuwo aad u xun oo leh qalab aamin ah oo aan ku guuleysan.
Hore: Nidaamka Laabista Bi
Xiga: Slim Sift & Slide Nidaamka